Araka ny Prosser, ny Beats Studio Buds dia haseho amin'ny 21 Jolay | Avy amin'ny mac aho
Taorian'ny tsaho maro momba ny fisian'ny kabary vaovao avy amin'ny marika Beats ary rehefa mety hiditra amin'ny tsena izy ireo dia sahy nametraka daty ny mpandalina Prosser. Araka ny filazany, ny headphone izay efa manana an'i LeBron James izy halefa eny an-tsena amin'ny 21 Jolay. Na dia talohan'ilay AirPods 3 honohono aza dia tampoka izay tsy misy fantatra.
Marina fa nihanakaaka tato ho ato ny tsaho sy ny fivoahana manodidina ny Beats Studio Buds tato anatin'ny tapa-bolana, mbola tsy nahalala na inona na inona momba ny famoahana azy ireo izahay. Marina fa tamin'ny sary rehetra efa hita sy ny hafa dia antenaina fa efa akaiky ho avy io. Ankehitriny, tatitra vaovao iray no milaza fa hanomboka amin'ny 21 Jolay ireo headphone vaovao tsy misy tariby ao amin'ny tsipika Beats. Ao amin'ny tatitra, Jon Prosser milaza loharano azo antoka Mampiseho headphones vaovao hisantatra amin'ny 21 Jolay amin'ny alàlan'ny fanambarana an-gazety.
Ny famoahana ny volavolany na ny famaritana azy ireo dia tsy zava-dehibe loatra, indrindra satria sary maro no efa navoaka tamin'ny fomba mety hahatongavan'izy ireo. Ilay mpilalao basikety dia tazana tamin'ny headphone tsy mbola fahita ary tsy eny an-tsena izany ary izany no nahatonga ny fiheverana fa izy ireo no Studio Buds, saingy tsy misy tena fantatra. Raha voamarina ny zava-drehetra, afaka iray volana mahery dia hanana ny mpifanandrina vaovao amin'ny AirPods Pro eny an-tsena isika. Izay indray no tsy miresaka momba azy ireo intsony.
Toa nijanona ny tsaho momba ireo Beats vaovao ireo. Vintana ve? Ataoko angamba fa tsy izany. Ny zava-drehetra dia tsy maintsy misy ny tempos ananany ary Apple dia manam-pahaizana amin'izany. Azo inoana fa misy acesado amin'ny tsaho momba ny AirPods 3 mba tsy handray ny sain'ireto Studio Buds vaovao ireto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Navoaka tamin'ny 21 Jolay i Beats Studio Buds, hoy i Prosser